Ch6लूका – 2माछा
घर / बाइबल / लूका को सुसमाचार / Ch6लूका
6:1 अब यो कि भयो, दोस्रो पहिलो विश्राम-दिनमा, उहाँले अन्न क्षेत्र मार्फत पारित रूपमा, आफ्ना चेलाहरूलाई अन्न कान अलग र खाइरहेका थिए, आफ्नो हात मा तिनीहरूलाई दल्नु द्वारा.
6:2 त्यसपछि केही फरिसीहरू तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "छैन Sabbaths मा न्यायसंगत छ के तपाईं गरिरहेको किन?"
6:3 अनि तिनीहरूलाई प्रतिक्रिया, येशूले भन्नुभयो: "तपाईं यो पढ्न छैन, उहाँले भोक हुँदा दाऊदले के, र ती उसलाई जो थिए?
6:4 उहाँले परमेश्वरको घरमा कसरी प्रवेश, र उपस्थिति को रोटी लिनुभयो, र यो खाए, र जो थिए ती दिनुभयो, यसलाई न्यायसंगत छैन यद्यपि यो खान कसैले लागि, एक्लै पूजाहारीहरूले बाहेक?"
6:5 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "मानिसको पुत्र लागि प्रभु हुनुहुन्छ, विश्राम दिन पनि। "
6:6 र यो पनि त्यस्तै भयो, अर्को विश्राम-दिनमा, उहाँले सभाघरमा मा प्रवेश, र उहाँले सिकाउनुभयो. र त्यहाँ एक मानिस त्यहाँ थियो, र आफ्नो दाहिने हात withered थियो.
6:7 र शास्त्री र फरिसीहरूको विश्राम-दिनमा उहाँले निको हुनेछ कि अवलोकन, तिनीहरूले जसबाट उहाँको विरुद्धमा एउटा अभियोग पाउन सक्छ भनेर.
6:8 यद्यपि साँच्चै, उहाँले आफ्नो विचार थाह, र त्यसैले तिनले withered हात थियो जसले मानिसलाई भन्नुभयो, "खडा र बीचमा खडा।" अनि अप बढ्दो, उहाँले अझै पनि खडा.
6:9 त्यसपछि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: यो राम्रो के गर्न Sabbaths मा न्यायसंगत छ भने "म तपाईंलाई सोध्न, वा दुष्ट गर्न? एक जीवन स्वास्थ्य दिन, वा यसलाई नाश गर्न?"
6:10 र सबैलाई मा वरिपरि देख, उहाँले मानिसलाई भन्नुभयो, "आफ्नो हात टिक्ने।" अनि उहाँले यो विस्तार. र आफ्नो हात पुनःस्थापित थियो.
6:11 त्यसपछि तिनीहरूले पागलपन भरिएको थियो, र तिनीहरूले आपसमा छलफल, के, खासमा, तिनीहरूले येशूको बारेमा के हुन सक्छ.
6:12 र यो पनि त्यस्तै भयो, ती दिनहरुमा, उहाँले प्रार्थना गर्न एक पर्वतमा गए. अनि उहाँले रात भर परमेश्वरको प्रार्थनामा थियो.
6:13 अनि जब डेलाईट आइपुगेका थिए, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाएर. अनि उहाँले तिनीहरूलाई बाहिर बाह्र रोजे (जसलाई उहाँले पनि प्रेरितहरू नाउँ):
6:14 सिमोन, जसलाई उहाँले surnamed पत्रुस, र एन्ड्रयू आफ्नो भाइ, याकूब र यूहन्ना, फिलिप र Bartholomew,
6:15 मत्ती र थमस, अल्फयसको याकूब, र Zealot भनिन्छ जो सिमोन,
6:16 र जेम्स को यहूदा, र यहूदा इस्करियोत, जो एक देशद्रोही थियो.
6:17 र तिनीहरूलाई घट्दो, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई एक भीड संग एक स्तर ठाउँमा उभिए, र यहूदियामा र यरूशलेम र seacoast सबै मानिसहरूको प्रचुर भीड, र टायर र Sidon,
6:18 तिनीहरूले उहाँलाई सुन्न सक्छ र आफ्नो रोग निको हुन भनेर जो आएका थिए. र अशुद्ध आत्माहरू परेशान थिए ती निको थिए.
6:19 र सम्पूर्ण भीड उहाँलाई स्पर्श गर्न खोजिरहेका थिए, किनभने शक्ति उहाँबाट बाहिर गए र सबै निको.
6:20 र आफ्ना चेलाहरूलाई आफ्नो आँखा माथि उठाने, उहाँले भन्नुभयो: "धन्यको तपाईं गरिब छन्, तपाइँको लागि परमेश्वरको राज्यको छ.
6:21 आशिष् अब भोक हो जो तपाईं छन्, तपाईं सन्तुष्ट हुनेछ लागि. अब जो तपाईं आशिष् रोइरहेका छन् छन्, तपाईं हाँस्नुहुन्थ्यो हुनेछ लागि.
6:22 मानिसहरू तपाईं घृणा गर्नेछ जब आशिषित तपाईं हुनेछ, र जब तिनीहरूले तपाईं अलग र तपाईं निन्दा हुनेछ, र दुष्ट भने आफ्नो नाम बाहिर हालियो, किनभने मानिसको पुत्रको.
6:23 त्यो दिन र exult मा खुशी हुन. हेर लागि, आफ्नो इनाम स्वर्गमा ठूलो छ. यी नै कुराहरू लागि आफ्नो पुर्खाहरूले अगमवक्ताहरूको गरे.
6:24 यद्यपि साँच्चै, धनी छन् जो तपाईं धिक्कार, तपाईं आफ्नो कन्सोलेसन छ.
6:25 सन्तुष्ट जसले तिमीहरूलाई धिक्कार, तिमीलाई भोक हुनेछ लागि. अब हंसी जसले तिमीहरूलाई धिक्कार, लागि शोक र रुनेछन् हुनेछ.
6:26 धिक्कार तिमीहरूलाई मानिसहरू तपाईं आशिष् हुनेछ जब. यी नै कुराहरू लागि आफ्नो पुर्खाहरूले झूटा अगमवक्ताहरूलाई गरे.
6:27 तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले सुनिरहेका छन्: आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम. जसले तपाईंलाई घृणा गर्नेहरूलाई राम्रो के.
6:28 जसले तपाईंलाई सराप्न ती आशीर्वाद, र जसले तपाईंलाई निन्दा गर्नेहरूका लागि प्रार्थना.
6:29 र तिनलाई जसले तपाईंलाई गालामा मा प्रहार, पनि अन्य प्रस्ताव. र उहाँबाट जो आफ्नो कोट टाढा लाग्छ, तपाईँको अंगरखा चढाउनसमेत छैन.
6:30 तर तपाईं को सोध्न गर्ने सबै वितरण. र जो टाढा लिन्छ फेरि उहाँलाई सोध्न छैन तपाइँको के हो.
6:31 र मानिसहरू व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ झैँ, तिनीहरूलाई पनि उस्तै व्यवहार.
6:32 र यदि तपाईं ती प्रेम गर्ने तपाईं प्रेम, के क्रेडिट तपाईं कारण छ? लागि पनि पापी तिनीहरूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई प्रेम.
6:33 र यदि तपाईं राम्रो गर्न गर्नेहरूलाई राम्रो गर्नेछ, के क्रेडिट तपाईं कारण छ? वास्तवमा, पनि पापी यसरी व्यवहार.
6:34 र तपाईं प्राप्त गर्न आशा कसलाई ती गर्न ऋण भने, के क्रेडिट तपाईं कारण छ? पनि लागि पापी पापी गर्न उधारो, बदलामा नै प्राप्त गर्न.
6:35 त्यसैले साँच्चै, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम. राम्रो के, र उधारो, बदलामा केही लागि आशा. र त्यसपछि आफ्नो इनाम ठूलो हुनेछ, र तपाईं सबैभन्दा उच्च छोराहरू हुनेछ, लागि उसले आफूलाई पनि गुन नमान्ने र दुष्ट गर्न प्रकारको छ.
6:36 त्यसैले, दयालु हुन, बस आफ्नो पिता पनि दयालु छ.
6:37 निर्णय नगर, र तपाईं न्याय गरिनेछ. निन्दा छैन, र तपाईं दोषी हुनेछ. क्षमा, र तपाईं क्षमा गरिनेछ.
6:38 दिनु, र यो तपाईं दिइनेछ: राम्रो उपाय, तल थिचिएको र सँगै हल्लाइन्छ र overflowing, तिनीहरूले आफ्नो काखमा मा राख्नेछ. पक्कै पनि, भनेर बाहिर मापन गर्न प्रयोग नै उपाय, फेरि तपाईं मापन गर्न प्रयोग गरिनेछ। "
6:39 अब उहाँले तिनीहरूलाई अर्को तुलना भन्नुभयो: "कसरी अन्धा अन्धा नेतृत्व गर्न सक्छन्? ती दुबै एक खाडलमा दिनुहुन्छ छैन?
6:40 चेला आफ्नो शिक्षक माथि छैन. तर हरेक एक सिद्ध हुनेछ, उहाँले आफ्नो शिक्षक जस्तै छ भने.
6:41 र तिमी किन आफ्नो भाइलाई आँखा मा छ पराल देख्नुभएन, जबकि, आफ्नै आँखा मा छ लग, तपाईं विचार छैन?
6:42 वा तपाईं कसरी आफ्नो भाइ भन्न सक्छौं, 'भाइ, मलाई आफ्नो आँखा बाट पराल हटाउन अनुमति,'तपाईं गर्दा आफैलाई आफ्नो आफ्नै आँखा मा लग हेर्न छैन? कपटी, पहिलो आफ्नो आफ्नै आँखा बाट लग हटाउन, र त तपाईं स्पष्ट देख्ने, तपाईं आफ्नो भाइ आँखा बाट पराल बाहिर हुन सक्छ भनेर.
6:43 खराब फल उत्पादन जो कुनै राम्रो रूख छ लागि, न त एक दुष्ट रूख राम्रो फल उत्पादन गर्छ.
6:44 प्रत्येक रूख लागि यसको फल चिनिएको छ. तिनीहरूले thorns देखि नेभारा भेला छैन लागि, न त तिनीहरूले bramble झाडी देखि अंगूर भेला गर्छन्.
6:45 एक असल मानिस, आफ्नो हृदयको असल storehouse देखि, राम्रो छ के प्रदान गर्दछ. अनि एक दुष्ट मानिस, खराब storehouse देखि, दुष्ट छ के प्रदान गर्दछ. हृदय को प्रशस्त मात्रामा बाहिर लागि, मुख बोल्छ.
6:46 तर किन मलाई कल गर्छन्, 'प्रभु, प्रभु,'म भन्न के छैन?
6:47 मलाई आउँछ जो कोहीले, र मेरो शब्दहरू सुन्नुहुन्छ, र तिनीहरूलाई गर्छ: उहाँले जस्तै छ के म तपाईंलाई प्रकट हुनेछ.
6:48 उहाँले एक घर निर्माण मानिस जस्तै छ, गहिरो dug छ र रक मा जग राखिएको छ, जसले. त्यसपछि, यो floodwaters आउँदा, नदी भनेर घर विरुद्ध भागन थियो, र यो सार्न सक्षम थियो. यो रक मा स्थापित भएको थियो लागि.
6:49 तर जसले सुन्छन् र के गर्दैन: उहाँले माटो मा आफ्नो घर निर्माण मानिस जस्तै छ, एक जग बिना. नदी यो विरुद्ध रवाना, र यो चाँडै तल खसे, र घर को खण्डहर ठूलो थियो। "